UMlawuli oLawulayo uphuma njengeForam yoSuku lwezoKhenketho lweHlabathi eMekong ngoku kwizigaba zokugqibela
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » UMlawuli oLawulayo uphuma njengeForam yoSuku lwezoKhenketho lweHlabathi eMekong ngoku kwizigaba zokugqibela
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseCambodia • Iindaba zase China eziQhekezayo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeLaos Breaking • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • Iindaba zaseMyanmar • iindaba • abantu • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba eziVuthayo zaseVietnam
UMlawuli oLawulayo we-Ofisi yokuLungelelanisa uKhenketho eMekong uJens Thraenhart
Ukhenketho lwaseMekong lusingise ku-Okthobha oxakekileyo neziganeko ezibini zokugqibela zokuba Jens Thraenhart phantse iminyaka esibhozo yobunkokheli eza kuphela ngo-Okthobha u-15.
Iiprojekthi eziza kuboniswa zibandakanya ukumiliselwa kwewebhusayithi entsha yeNgqokelela yeMekong yamava kunye nokuthunyelwa kwesiCwangciso soNxibelelwano sezoKhenketho eMekong.
Kwakhona kubandakanya ukubhengezwa kwe-2021 Mekong Hero award kunye neendawo zokugqibela zeMekong Innovations kwiNkqubo yoKhenketho oluZinzileyo (MIST).
Le iya kuba yimisitho yokugqibela yoKhenketho lwaseMekong nguMlawuli weSigqeba wangoku.
Umphathi olawulayo ophumayo uJens Thraenhart uphawule wathi: “Njengokuba ndiza kusondela esiphelweni seminyaka esibhozo njengomlawuli olawulayo kwi-Ofisi yoLungelelwaniso lwezoKhenketho eMekong, ndinemincili kakhulu kukusebenza neqela lethu elincinci ukwenza iminyhadala emibini ngo-Okthobha.”
Uluhlu olunomdla lweeprojekthi eziza kuboniswa kwezi ziganeko zibandakanya ukumiliselwa kweQokelelo lamava eMekong iwebhusayithi yabathengiUkuthunyelwa kwesiCwangciso soNxibelelwano lwezoKhenketho eMekong, ukubhengezwa kwe-2021 Mekong Hero award, kunye neendawo zokugqibela zeMekong Innovations Ukhenketho oluZinzileyo Inkqubo (MIST) yeengxelo ze-TTR ngeveki.
UTraenhart uphawula ukuba "izakuba ziziganeko zam zokugqibela zoKhenketho eMekong, kodwa ndiza kuhlala ndiqhagamshelene kwaye ndinethemba lokunxibelelana nani nonke."
UJens Thraenhart kutshanje kwathiwa igama IQhawe lezoKhenketho nge Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN) . Eli bhaso liyaziqonda ezo zibonise ubunkokeli obungaqhelekanga, izinto ezintsha, kunye nezenzo, kwaye iJens iye yaphumelela ngokungagungqiyo ukukhuthaza ezokhenketho ezinoxanduva kunye nee-ajenda zokhenketho ezizinzileyo, ukuzisa ukubonakala kunye nezibonelelo kwii-SMEs nakuluntu, kunye nokusasaza ii-ajenda eziqhubela phambili kwinqanaba eliphezulu loluntu-labucala. intsebenziswano.
I-TTR IVEKI ithi iingxoxo malunga nokuqeshwa komlawuli olawulayo oza kungena endaweni yazo ziya phantse kwintambo yokuba la mazwe mathandathu avumelane ngokuba ngubani oza kuthatha indawo eTraenhart.
Ngokwesi sicwangciso, amazwe amathandathu e-MTCO (eCambodia, China, Laos, Myanmar, Vietnam, nase Thailand), kufuneka abhengeze ukhetho lwabo kwiNgqungquthela ye-Destination Mekong ukusukela nge-21 ukuya ku-Okthobha u-Okthobha. Usuku lokugqibela lukaTraenhart kwiofisi yeMTCO lubekelwe u-Okthobha u-22.
Indawo ekuyiwa kuyo eMekong kwiQonga loSuku lwezoKhenketho kwiHlabathi liphela ngo-Okthobha 6-7
Umnyhadala obonakalayo uza kugqamisa abagqwesileyo abangama-2021 abakhuphisana nabo ngembeko kwiMekong Innovations yonyaka yoKhenketho oluzinzileyo (MIST) kunye namava eMekong Showcases (EMS).
Abokugqibela kuluhlu olufutshane baya kwenza indawo yabo yokugqibela kwiforum ebonakalayo, bathathe indawo ephambili ukubonisa amanyathelo okhenketho azinzileyo kunye namashishini ezentlalo.
Kukho abali-15 abagqibela kumjikelo wokuGqibela weMekong Showcases 2021 abavela eCambodia, eLao PDR, eThailand, eVietnam, naseGuangxi naseYunnan e China. Ngenxa yemeko yangoku eMyanmar, ibhodi yeQela leNgcebiso ngezoKhenketho eMekong igqibe kwelokuba yamkele onke amashishini akhethiweyo kuluhlu lwaseMyanmar njengamava eMiboniso ye-Mekong.
Bhalisa simahla apha.
Ingqungquthela yeMekong yokuya e-Okthobha 21-22
Umnyhadala obonakalayo uza kuba nezithethi eziphambili ezifana nomyili wehotele uBill Bensley kunye nomsunguli wempembelelo kwezentlalo uJimmy Pham, umseki weHanoi esekwe kushishino lwentlalontle kunye ne-Experience Mekong Showcase eyamkelayo, iKOTO (Yazi enye - Fundisa enye).
Ezinye izithethi zibandakanya ophumelele i-MIST 2018, Aroun KKK ye-Bamboo Lao, kunye ne-MIST 2019 Finalist, Ros Rotanak waseCambodia-based Chef Nak. Amagqabantshintshi okwamkela ayakunikwa nguNatalia Bayona, uMlawuli wezoBugcisa, uTyalo-mali, kunye neMfundo yoMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO), kunye noSteven Schipani, iNgcali eyiNtloko yeShishini lezoKhenketho kwiBhanki yoPhuhliso yaseAsia (ADB).
Iforum iya kumodareyithwa ngqo kwiLebhu yokuQamba izinto kwiSasin Business School e-Bangkok-bssed Chulalongkorn University.
Ngexesha lengqungquthela, uSihlalo wekomiti yeeMekong Heroes, uKobkarn Wattanavrangkul, owayesakuba nguMphathiswa wezoKhenketho nezeMidlalo, uza kubhengeza ophumeleleyo kwi-2021 Mekong Hero award.
Ngolwazi oluthe kratya kunye nokubhalisa, tyelela apha.
IOfisi yoLungelelwaniso lwezoKhenketho eMekong (MTCO) ilawulwa kwiiofisi zeSebe lezoKhenketho loMphathiswa Wezokhenketho neMidlalo yaseThailand, esekwe eBangkok, kwaye yasekwa ngenkxaso mali evela koorhulumente abathandathu baseCambodia, China, Laos, Myanmar. , IVietnam, kunye neThailand, ezimele iGreater Mekong Sub-region (GMS).